Fanomanana: Ny fametrahana ny ankizy
Tokony hianarana ny fialan-tsasatra: Aza atao avo loatra ny fanantenana
Miaraha mitsangatsangana, mankafy sakafo hariva tantaram-pitiavana ary mifampiresaha fotsiny 'momba an' Andriamanitra sy izao tontolo izao 'mandra-pahalin'ny alina nefa tsy fanelingelenan'ny ankizy tsy tapaka.
Miala amin'ny fiainana andavanandro: mila fialan-tsasatra ihany koa ny renim-pianakaviana sy ny reny
Nofinofy izany ho an'ny mpivady maro manan-janaka. Roa ora mahafinaritra ho an'ny roa, faran'ny herinandro tsy manan-janaka? - Ireto ny firariana izay azo tanterahina ary mampanan-karena ny fifandraisana.
Pause vom Eltern sein – © Dmitriy Raykin / Adobe Stock
Ny fiatoana kely amin'ny maha ray aman-dreny
Ankehitriny, tsy mora foana ny maha-mpianakavy. Ilay maodely efa niasa taloha ny lehilahy ary ny vehivavy mijanona ao an-trano miaraka amin'ny zaza dia tsy hita intsony. Ny vehivavy dia maniry hatrany ny hampiroborobo ny asany manokana ary mbola mikarakara ny taranaka manaraka.
Eo anelanelany dia misy zavatra betsaka hatao ary be resaka. Mila fiheverana be koa ny ankizy. Azo takarina fa ny hozatry ny ray aman-dreny dia mahatratra ny fetrany amin'ny fotoana iray. Ny faniriana fialan-tsasatra kely, ny hariva mahafinaritra sy ny fialan-tsasatra dia mihamitombo hatrany.
'Ovao ny sary an-tsary' indraindray
Ny fialan-tsasatra amin'ny fiainana isan'andro dia azo atao ihany koa amin'ny rindrinao efatra. Saingy ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mahita fa miala sasatra rehefa manao izay hahamendrika azy eo ambony fandriana izy ary nianjera tamin'ny harona feno fanasan-damba ny mason'izy ireo. Ny paositra mety mbola tsy vita dia mipongatra eo amin'ny latabatra ary ny vovoka nandritra ny efa-bolana lasa dia mijanona eo ambonin'ny vata.
Ny faran'ny herinandro tsy misy zanaka ao amin'ny hotely mangina dia mety hahasoa kokoa. Raha tsy azo atao ara-bola ny famandrihana efitrano fandraisam-bahiny dia misy ihany koa ny fisotroan-dronono mora vidy sy trano fialan-tsasatra amin'ny faritra mangina sy ambanivohitra.
Na dia fiara maharitra adiny iray aza dia tsy voatery hatao drafitra. Satria ny fialan-tsasatra dia tsy midika hoe mandeha any amin'ny firenen-kafa. Ny fanovana ny habaka ihany izay manome fomba fijery vaovao sy fialan-tsasatra no mitana andraikitra lehibe.
Alohan'ny hamandrihana ny faran'ny herinandro dia ny hikaroka trano ho an'ireo tanora no lahasa. Ny fianakaviana tsy misy afa-tsy zaza tokana dia mazàna mahita azy amin'ny renibeny sy raibe tsy misy olana. Na izany aza, raha manan-janaka roa na roa ianao dia mety hanana olana amin'ny fitadiavana fikarakarana sahaza.
Raha toa ny raibe sy renibe mahita fa tsy afaka hikarakara zaza maromaro, mpiray tampo, raikely na namana tsara dia mety hanao ilay asa.
Mora kely kokoa ho an'ny ankizy lehibe io. Satria faly tokoa ireo tanora vao manomboka rehefa manana fandriam-pahalemana roa andro eo imason'ny ray aman-dreniny izy ireo ary afaka mandany ny alina miaraka amin'ilay sakaizany akaiky indrindra.
Rehefa dinihina tokoa, ity dia fotoana mety hijerena filôzôfia am-pilaminana momba ireo zavatra mahaliana izay misy fiatraikany amin'ny tanora ankehitriny ary mazava ho azy ny mijery fahitalavitra hatramin'ny alina.
Raha vao hita ny trano hipetrahana mety ho an'ny ankizy dia afaka manomboka manangona entana ny ray aman-dreny. Mba tsy hipoitra ao anaty fiara ny toe-javatra mampiady saina dia zava-dehibe ny fampiharana ny fifanajana fa tsy tezitra amin'ny zavatra kely.
Tsy tokony hanantena be loatra amin'ny faran'ny herinandro malalaka ianao. Ny antony: manomboka amin'ny andro iray ka hatramin'ny manaraka dia tsy azo atosika mora foana ny fiainana andavanandro. Ary noho izany tsy ny rehetra no mahomby amin'ny fifindrana amin'ny tsindry ara-potoana sy ny adin-tsaina hiala sasatra ary hiala sasatra avy hatrany.
Rehefa dinihina tokoa, tsy azo atao koa ny mandeha amin'ny fahitana rehetra ao an-tanàna na manatrika hetsika rehetra. Amin'ny farany dia mody reraka kokoa noho ny taloha ny ray aman-dreny talohan'ny nandehanany. Fa kosa tokony ho ireo zavatra kely tokony hankafizina ankehitriny: matory, misakafo maraina lava, mifamihina, miala sasatra amin'ny sauna na milomano, mankafy mitsangatsangana ala, ary mamarana divay sy labozia ny andro mahafinaritra.
Ny fialan-tsasatra sy ny resadresaka ifandraisany tsara matetika dia avy aminy irery. Angamba aza misy olana isan'andro mitranga, izay amin'ny resaka tsy dia manaitra intsony. Tsy azo inoana fa misy olana lehibe azo vahana ao anatin'ny roa andro.
Na izany aza, raha vao mahita ny teboka fanombohana resaka ianao, ny fomba hahatongavana any dia farafaharatsiny farafaharatsiny. Ny zava-dehibe indrindra anefa dia ny mandany fotoana miaraka amin'ny olon-tianao fotsiny ary hahafantatra fa tsara vintana ianao manana an'io olona manokana io eo anilanao.
Manomboka amin'ny akanin-jaza ka hatrany am-pianarana
Iza no biby tokony ho | fampianarana
Partnerschaft - Gemeinsames Baden
Faran'ny herinandro romantika | Fiaraha-miasa tantaram-pitiavana
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 25. Jolay 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasaKeywords ray aman-dreny, Meteza ho ray aman-dreny, Meteza ho ray aman-dreny fa mijanona ho mpifankatia, Liebe, fiaraha-miasa, raiki-pitia, fitiavana
indray Lahatsoratra taloha: Hiran'ny ankizy | Mozika ho an'ny ankizy
more Lahatsoratra manaraka: Manomboka amin'ny akanin-jaza ka hatrany am-pianarana